BGR - -6စက်တင်ဘာလ6အပေါ်အခမဲ့ရောင်းဖို့က iPhone application များပေးဆောင် Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ BGR - "6 စက်တင်ဘာလ6အပေါ်အခမဲ့ရောင်းဖို့က iPhone application များပေးဆောင်
BGR -6စက်တင်ဘာလ6အပေါ်အခမဲ့ရောင်းဖို့က iPhone application များပေးဆောင်
အဆိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းမနေ့ကကန့်သတ်အချိန်များအတွက်အခမဲ့ရောင်းလိုက်သော iPhone နှင့် iPad များအတွက်ရှစ် paid apps များအပြည့်အဝဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့နေဆဲရှိပါတယ် အချို့သောအခမဲ့လက်ဆောင်များ သင်ကလွဲချော်လျှင်။ ရောင်းအားမကုန်မီအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအားလုံး applications များ browsing သည့်အခါသို့သော်ကျနော်တို့ကသောကြာနေ့တွင်အသစ်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရှိသည်။
ဤဆောင်းပါးသည် iPhone နှင့် iPad ကန့်သတ်အချိန်အဘို့မိမိတို့ developer များအားဖြင့်တာဝန်ခံ၏ရရှိနိုင်အခမဲ့ပေးဆောင်များအတွက် applications များဖုံးလွှမ်း။ ။ BGR မဆိုလျှောက်လွှာပြုစုသူနှင့်အတူဆက်နွယ်ခြင်းမရှိပါ။ သူတို့အခမဲ့ဖွစျလိမျ့မညျကိုဘယ်လိုရှည်လျားပြောပြရန်လမ်းမရှိ။ ထိုသို့သောရောင်းအားတစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်ပါတ်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့အာမခံနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာတို့သည်ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခြင်း၏အချိန်မှာအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦး link ကို click နှိပ်ပြီးအစားကမရှိတော့အခမဲ့ "ရ" ၏နောက်လာမည့် app တစ်ခုမှဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းကိုကြည့်ပါလျှင်။ အဆိုပါရောင်းချမှုပြီးစီးခဲ့သည်။ သငျသညျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါက, Apple ကသငျသညျကိုအားသွင်းပါလိမ့်မယ်။ တချို့က applications များထပ်တိုး In-app ကိုဝယ်ယူမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RSS feed မှ Subscribe သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန် e-mail ကိုတပ်လှန့်ကို ဤအပို့စ်များကိုဖန်ဆင်းသောအခါအသိပေးကျနော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းပျောက်ဆုံးရောင်းအားကိုရှောင်ကြဉ်ရမည်။
နောက်ဆုံးပေါ်အတုထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာကို အသုံးပြု. ဘယ်နေရာမှာမဆိုမြေကြီးပေါ်မှာမဆိုအင်းဆက်ပိုးမွှားချက်ချင်းခွဲခြားသတ်မှတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာဘေ့စကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ပူးပေါင်းကစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုရလဒ်ပေးသည်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သာကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်-သင်ယူမှု algorithm ကိုဖွဲ့စည်းရန်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချပညာရှင်များတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကြားဝင်။
Frame ကကောလိပ်နှင့်အတူ, သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောဓာတ်ပုံကိုဘောင်နှင့်အတူ bonding ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ , သင့်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကဖျော်ဖြေအချိန်ကုန်သက်သာနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ပုံရိပ်တွေဝေမျှဖို့အံ့သြဖွယ်ရုပ်ပုံ Collage Create!
- ရှုခင်းနှင့်ပုံတူ orientation ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
- ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ်ကင်မရာ Added ဓာတ်ပုံများ။
- မျိုးစုံကိုထည့်သွင်းခြင်း: တခါမှာမျိုးစုံဓာတ်ပုံများထည့်သွင်း။
- Displacement, pinching နှင့်လည်ပတ်
- အများအပြားကဓာတ်ပုံကိုဘောင်: နှလုံး, ပတ်ပတ်လည်, ကြယ်ပွင့်, Cloud, etc သင်အလိုရှိသောအခါပုံဘောင်။
တစ်ဦးမလိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကို -Add: တစ်ဘုံနှောင်ကြိုးဖန်တီးရန်ဓါတ်ပုံဘောင်ပါဘူး။
ရရှိနိုင် -Many အရောင်များဘောင်။
-Auto-frame ကို: အလိုအလြောကျသစ်ကိုဖြည့်စွက်ဘောင်။ နောက်ဆုံး frame ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအဖြစ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ။
-Collage ဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ: အနက်ရောင်အဖြူ, ရုပ်ပြ, cyanotype, Sepia, ပျော့ပျောင်းသောအလင်း, အဟောင်းစတိုင်, ထိတွေ့, vibrancy, Vignette နဲ့လာပို။
-Apply အားလုံးမှ: အရောင်တစ်ဘောင်ပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံများကိုအပေါ်တစ်ဦးဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ရိပ်တစ်ဦးကို double-click နှိပ်ပြီးသက်ဆိုင်ပါသည်။
Facebook သို့မဟုတ် Twitter ပေါ်တွင်အသံဖမ်း, post ကိုသို့မဟုတ်ရှယ်ယာများအတွက် -High အရည်အသွေးရုပ်ပုံလွှာ။
ဓာတ်ပုံများများအတွက်နောက်ခံ -Press ။
foreground ကသို့မဟုတ်ထိပုတ်ပါစေခြင်းငှါငါပြန်ရွှေ့ဖို့ကျင်းပရန် -Press ဓာတ်ပုံ။
နှစ်ကြိမ်နောက်ခံပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ဖို့ဓာတ်ပုံရိုက်အပေါ် -Press ။
-Press နှစ်ကြိမ်အားလုံးရုပ်ပုံများကိုအသုံးချခံရဖို့ frame ကို, အရောင်, သက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်မှောင်မိုက်အရိပ်ပေါ်မှာ။
-On က iPhone / iPod touch, ရွေးချယ်မှုများအဘို့အလှုပ်။
ဒေါင်းလုပ် collage ဘောင်
သင်၏အချိန်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ ကို C-အချိန်သင်သောနေရာများအတွက်သုံးဖြုန်းမည်မျှသင့်ရဲ့အဖိုးတန်အချိန်ကိုတွေ့မြင်ကူညီပေးသည်သော application ဖြစ်ပါတယ်။
ကို C -Time အလိုအလျောက်သင်တစ်နေ့လျှင်သတ်မှတ်ထားသောနေရာများမှာသုံးစွဲအချိန်တစ်လနှင့်တစ်နှစ်မှတ်တမ်းတင်လိမ့်မယ် geofence စနစ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဒါကအားလုံးလျှောက်လွှာစတင်ခလုတ်နှိပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲအလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သင်သတ်မှတ်ကြပြီသောနေရာများ၌ကျင်လည် / မောင်းအခါတိုင်း C-အချိန်သင့်ရဲ့ input ကိုက register လုပ်သွားနှင့်သင်အဲဒီမှာသုံးဖြုန်းအချိန်ကိုမှတ်တော်မူ၏။ သငျသညျဤအရပျစှနျ့ခှာသည့်အခါ C-အချိန်ကိုအလိုအလျောက်ရေတွက်ရပ်တန့်။
•ပြင်ဆင်ရန် / မှတ်တမ်းတင်ထားသောအချိန်
•ပို့ကုန် / အီးမေးလ်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ရာသီဥတု data ပို့
•လူမှုမီဒီယာများတွင်သင်၏အချိန် ်. : facebook / twitter / Sina Weibo
အဆိုပါ geofence စနစ်၏အလိုအလျှောက် mode ကိုလိုအပ်ပါတယ်နှင့်ကိုအသုံးပြုသည်:
•4က iPhone, iPhone, 4S,5က iPhone, iPhone, 5C, 5S iPhone နှင့်အသစ်များ။
□ကို Wi-Fi ကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာကို enable လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာအလိုအလျောက် mode ကိုအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
□ကို C-Time အတူတူလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (ကို virtual ခြံစည်းရိုး) ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ Apple က "သတိပေးချက်" app ထဲမှာကိုအသုံးပြုသည်အဖြစ်။
=================================== ===== ======
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လျှောက်လွှာ။ အစဉ်မပြတ်ငါငါ့အချိန်အချိန်ကိုမေ့လျော့။ ဤလျှောက်လွှာနှင့်အတူပါကအလိုအလျှောက်ကိုင်တွယ်နေပါတယ်။ ငါကချစ်ကြ!
အလွန်ကောင်းတဲ့△။ ငါသည်ဤလျှောက်လွှာကိုချစ်ကြတယ်။ ဒါဟာငါ့အဘာမှမရိုက်ထည့်ဖို့သတိရပါရန်မလိုဘဲအကြှနျုပျ၏အလုပ်လုပ်အချိန်အတိုင်းလိုက်နာမှငါ့ကိုတကယ်ကူညီပေးသည်။
△အတော်များများအသုံးပြုမှု။ အခုတော့ကျွန်မနာရီကိုချွတ်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကိုခေါ်တာအဘယျသို့တစ်နေ့လျှင် / အချိန်မှတ်မိဖို့မလိုပါ။ အကြီးအအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ငါသည်အမြင့်မားကအကြံပြုပါသည်။
△ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်။ အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော ... အကြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့် Geofencing စုံလင်သောပါ!
အလွန်ထက်မြက်လျှောက်လွှာ။ ဤလျှောက်လွှာကိုငါကိုအသုံးပြုဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအကြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်, စမတ်အသုံးဝင်သောရဲ့, ငါအလွန်အမင်းကအကြံပြု :)
ငါသည်ဤလျှောက်လွှာကိုနောက်ကွယ်မှစိတ်ကူးကိုချစ်△! ... ဂရိတ်စိတ်ကူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း, သူငယ်ချင်းလုပ်ကိုင်ဖို့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအကြိုက်ဆုံး bar ကိုခြေရာခံနိုငျ!
Amazing App ကို△! , ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပန်းဖြေသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကက "အစုရှယ်ယာ" အတွက်တစ်စုံလင်သောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ငါလူတိုင်းကိုဒီ app ကိုအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။
app ကိုပြီးပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာ။ ကိုယ်တိုင်နာရီအတွင်းဖြည့်ဖို့စားပွဲနှင့်အတူနှောငျ့ယှကျရန်မလိုပါ။ အားလုံးလိုအပ်သော timestamps တွေကိုအလိုအလျှောက်သိမ်းဆည်း !!
စုံလင်သော app ကို။ သုံးစွဲဖို့ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်အချိန်ကုန်ရာခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အဘို့အအသုံးဝင်သော။ ဂုဏ်ယူပါတယ်!
သင်သည်သင်၏အချိန်ဖြုန်းဘယ်မှာသိရန်△ Excellent ကလျှောက်လွှာ။ ကြော်ငြာအဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။ က iOS ကိုသတိပေးချက်များအသုံးပြုသောကြောင့်ကဲ့သို့တူညီသောကို virtual အတားအဆီးယန္တရားကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်သောကြောင့်စသည်တို့ကို, သင့်ဘက်ထရီမနေပါနဲ့
ဂရိတ် App ကို△ !! ငါ2ရက်သတ္တပတ်ယခုအသုံးပြုရန်နှင့်ကကျွန်မရဲ့အချိန်ဖြုန်းဘယ်မှာကြည့်ဖို့တော်တော်အထင်ကြီးပါတယ်။ ဒါဟာသုံးစွဲဖို့တကယ်ရိုးရှင်းပါတယ်။ Excellent ကအလုပ်။
△ဒဏ်ငွေ။ တစ်ဦးကအလွန်အသုံးဝင်နှင့် Application သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ကောင်းသောအမှု,
ဒီ app △တကယ်အေးမြသည်။ ဤသူသည်ငါကျောင်းဖြုန်းမည်မျှအချိန်ကြည့်ဖို့ငါ့ကိုကူညီပေးသည်။ ဒါအသုံးဝင်သောပါပဲ။ အလွန်ကောင်းသောလျှောက်လွှာ။
အလွန်ကောင်းသောလျှောက်လွှာ△။ အလွန်လက်တွေ့ကျပြီးဿုံအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအချိန်ဂဏန်းတွက်စက် (နေ့စဉ်နာရီနေ့လယ်စာစား ... ) နောင်တရနိုင်ပေမယ်ဤလျှောက်လွှာကိုအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
ဂရိတ်△။ Funciona bem အီး tem boas funcionalidades ။ Recomendo ။
ကို C-Time Download
ကြံ့ခိုင်ရေးလမ်းညွှန် - သင်တန်းသင်ခန်းစာ
●ပိုမို 100 gyms တင်ပြသော
● Full HD ကိုရုပ်ရှင်တွေ
● Professional ကသင်တန်းများ
ကာယဗလ, အလေးမ, ကာယဗလနှင့်အလေးခြိနျသင်တန်း●အပြီးအစီးသိကောင်းစရာများ
** ဒီ app သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ buddy ဖြစ်လိမ့်မည်!
မှတ်မိဖို့, အလေ့အကျင့်ပိုမိုလွယ်ကူရရှိသွားတဲ့ဘယ်တော့မှ, သင်ရုံပိုကောင်းရယူပါ။ သငျသညျအကြိုးရလဒျချင်လျှင်, သင်ချင်သောလမ်းမှထွက်အလုပ်လုပ်!
ဒေါင်းလုပ် gyms လမ်းညွှန် - သင်တန်းသင်ခန်းစာ
ပုံမှန်စျေးနှုန်း: $ 0,99
အချိန် Save နှင့်သင်အပြည့်အဝသင်နှစ်သက်သောဂိမ်းများကိုခံစားရန်ခွင့်ပြုကြောင်းကိုကစားသမားဆက်စပ်သောလျှောက်လွှာနှင့်အတူအချိန်ကုန်သက်သာ။
ရမှတ် Keeping လွယ်ကူသောဖြစ်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့် Scoremaster သာရိုးရှင်းတဲ့ Scan ဖတ်ခြင်းနှင့် Pat အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာသုံးစွဲဖို့မြန်ဆန်စတိုင်နှင့်လွယ်ကူပါတယ်, နှင့်ရမှတ်အရေးမပါဘူး!
သင့်ရဲ့ရမှတ် drives တွေကို၏အရွယ်အစားလျှော့ချသို့မဟုတ်တိုးချဲ့, အရောင်များပြောင်းလဲနေတဲ့ပုံတူသို့မဟုတ်ရှုခင်း mode မှာ app ကို အသုံးပြု. သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်အတှေ့အကွုံကိုစောင့်ရှောက်မိမိစိတ်ကြိုက်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်အမြင့်ဆုံးရမှတ်သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းနှင့်ပိုပြီးအားဖြင့်ခွဲထားခဲ့သည်။
ဂိမ်းများချက်ချင်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့အားတွေ့ရှိရန်သင်တို့အဘို့ခန့်အပ်တာဝန်နိုင်ပါသည်။ Scoremaster ပင်သင်တို့ကိုပြန်လည်စတင်အခါအလှည့်ရှိသူမှတ်မိနိုင်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာကိုတစ်ကြိမ်မှာအတော်ကြာကစားသမားဂိုးသွင်းနှင့်သင့်ဂိမ်းတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောသမိုင်းရှုမြင်မစိုက်ပြောင်းလဲတဲ့ဂိမ်းကစားသမားအမိန့်အပေါ်ကျပန်းဆုံးဖြတ်ကြပါစို့ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုချွန်ထက် Animation နဲ့ပျော်စရာသံကိုသက်ရောက်မှုအားဖြင့်ပြည့်စုံစေသည်။
ကလောင်အမည် Remove နှင့်စက္ကူ, သင့်ဦးခေါင်း၌တွက်ချက်မှုလုပ်နေတာရပ်တန့်ခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကအောင်ပွဲမှတ်၏လမ်းကြောင်းအပေါ်လွတ်မြောက်ရန်နိုင်ကြောင်းသတိရပါ။ သင်အမှန်တကယ်အရေးပါအရာပေါ်အာရုံစူးစိုက် Scoremaster အကူအညီနဲ့ကြစို့: သင်ကိုချစ်လူတို့နှင့်အတူကိုချစ်ဂိမ်းကစား။
အဆိုပါ Scoremaster Download
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး ABC ရုပ်သံ
"ကျနော့်ရဲ့ပထမဦးဆုံး Credit: ABC" သင်၏သားသမီး, သင်ယူခြေရာကောက်နှင့်၎င်းတို့၏ပထမဦးဆုံးစာလုံးနှင့်အတူဆော့ကစားရန်အဘို့အတစ်စိတ်ကူး application ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပျော်စရာနှင့်အကြိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အက္ခရာသင်ယူဖို့သင့်ကလေးအားပေးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကလေး sketchpad အပေါ်ဆွဲ, ဤမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုချစ်နှင့်ပင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့သူ၏နာမကိုရိုက်ထည့်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီ application လေးကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်တကွကြွလာ:
1 အက္ခရာစဉ်တွေနှင့်အတူ 2) ပေးစာအသိအမှတ်ပြု (အသစ်)
4) Toolbox ကိုတစ်ဦးပုံကြမ်း pad ပါပါရှိသည်နှင့်ပုဒ်မသင်၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ
ဒီ application ကလေးတွေဆော့ကစားဘို့ဒီဇိုင်းနှင့်ကြီးကြပ်မှုသို့မဟုတ်မိဘများ၏လမ်းညွှန်မှုမပါဘဲကြာရှည်စွာများအတွက်သင်ယူသည်။ အဆိုပါဒီဇိုင်းသင့်ကလေးကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်မှာသင်ယူနှင့်သူတို့၏ရွေးချယ်မှု၏နိုင်ရန်အတွက်ဂိမ်းကစားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ကို My ပထမဦးစွာ ABC ရုပ်သံ function ကို Download လုပ်ပါ
အောက်မှာ $ 100 အဘို့အမေဇုံအပေါ် setting မရှိဘဲအကြီးအကို PC Monitor ကို Get - BGR
အိုင်ဖုန်းဘက်ထရီ Apple က XR များ၏အိုးအိမ် $ 130 ကုန်ကျဒါကြောင့်အစား $ 27 ဤကိစ္စတွင်ကြိုးစားကြ - BGR